Orinasa sy mpanamboatra GL166 ao anaty an'i Shina | Eurborn
Fitaovana mitaingina feno miaraka amina fonosana CREE XPE (6pcs LED) sy safidy tsaramaso 10/40. Fitaratra voasokitra, fananganana an-dranomasina an-dranomasina grade 316 nomeraina tolP68. Fametrahana famolavolana miafina sy miharo. Tsy misy tonon-taolana mekanika amin'ny loharano maivana miantoka fiarovana matanjaka amin'ny rano ingress .Product mihazakazaka mamaly mahafeno fepetra rehetra mikasika ny mari-pana. Ny safidin'ny mpamily 350mA dia tafiditra ao anatin'izany ny vahaolana mifamadika, ny mains, ny 1-10V ary ny DALI vahaolana azo ovaina。 6W wattage misy famirapiratana 600. Ny haben'ny vokatra dia 96x47mm. Ny jiro ivelany LED dia be mpampiasa amin'ny bozaka, jiro amin'ny kianja, arabe mpandeha an-tongotra. famolavolana lavaka visy tsirairay mba hiantohana ny fiarovana ny vokatra ary hialana amin'ny mety hangalarana. Jiro mamoaka hazavana mahery vaika ity. Ny endrik'ilay jiro dia azo alaina araka ny filan'ny famolavolana. Ny vera matanjaka be dia be no mahatonga ny vokatra ho matanjaka amin'ny fifindran'ny hazavana.
Mari-pana manodidina -2O ° C 2 + 45 ° C
MAZAVA TANORA GL166
GL166 CREE CW.WW, NW, Green Green, Blue, Amber S10 / F40 Constantcurrent 350mA andian-dahatsoratra 3M 2X0.75mm² Tariby 6W 600LM D96X47 D85
GL166D CREE CW, WW, NW, Green Green, Blue, Amber S10 / F40 Constantvoltage 24VDC mirazotra 3M 2X0.75mm² Tariby 6.5W 600LM D96X47 D85
GL166RGB CREE 2R + 2G + 2B S10 / F40 Constantcurrent 350mA andian-dahatsoratra 2x3M 4X0.5mm² Tariby 6W N / A D96X47 D85
GL166DMX-RGB CREE 2R + 2G + 2B S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController mirazotra 1.1M4X0.5mm² Tariby 6.5W N / A D96X47 D85
GL166DMX-RGB Edison RGB (Fullcolor) S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController mirazotra 1.1M4X0.5mm² Tariby 6.5W N / A D96X47 D85
GL166DMX-RGBW Edison RGBW (Fullcolor) S10 / F40 Constantvoltage 24VDC DMXController mirazotra 1-1M4X0.5mm² Tariby 6.5W N / A D96X47 D85
DMX decoder amin'ny namboarina * Data IES.support.
Teo aloha: Fahazavana PL021
Manaraka: GL150 ao anaty
GL129 ao anaty
GL116H ao anaty